पहिले शोख पूरा गर्न नाक र ओठ कटाए, अहिले फेरि काटे हातका दुई औंला | Nepal Khabar
पहिले शोख पूरा गर्न नाक र ओठ कटाए, अहिले फेरि काटे हातका दुई औंला
फरक फरक मानिसमा फरक किसिमको शोख हुन्छ। तर, केही मानिसको शोख भने अचम्मलाग्दो हुन्छ।
फ्रान्सका ३३ वर्षीय एन्थोनी लोफ्रेडो यस्तै अजीवको शोख भएका मानिस हुन्। डेलिमेल अनुसार हालै उनले शल्यक्रिया गरेर आफ्नो हातको दुई औंला काटेका छन्। लोफ्रेडोले आफूलाई फरक किसिमको देखिने बनाउन बायाँ हातको दुई औंला काटेका हुन्।
यसअघि नै लेफ्रेडोले नाक र माथिल्लो ओठ पनि काटिसकेका छन्। उनको शरीरभरि नै विभिन्न आकृतिको ट्याटु छ। यहाँसम्मकी उनले आफ्नो आँखाभित्र पनि ट्याटु बनाएका छन्। उनले आफूलाई ‘ब्ल्याक एलियन’ जस्तो देखाउन आफ्नो भेष परिवर्तन गरेका हुन्।
सन् २०१७ मा उनले एक अन्तर्वार्तामा आफू मानिस अर्को स्वरुपमा परिवर्तन हुनस सक्छ भन्नेमा विश्वास राख्ने व्यक्ति भएको बताएका थिए। उनी पहिला सुरक्षा गार्डको काम गर्थे। उनले आफ्नो शोख पूरा गर्नको लागि काम छाडिदिए।
लेफ्राडो अहिले आफू ‘ब्ल्याक एलियन’ बन्ने कार्यमा ३४ प्रतिशत सफल बताएको बताउँछन्। उनको यस किसिमको विवादित भेष बदल्ने कार्यले इन्स्टाग्राममा प्रशंसा र गाली दुवै पाइरहेको छ।
केहीले यो कार्यलाई आफ्नो शोख पूरा गर्न पछि नहटेको रुपमा लिएका छन् भने धेरैले उनी अन्ततः पछुताउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रकाशित: November 24, 2021 | 15:15:51 मंसिर ८, २०७८, बुधबार
अमेरिकी कम्पनीको भारतीय मूलका प्रमुख, जसले एउटै जुम कलबाट हटाइदिए ९०० कर्मचारी
७७ वर्षे र २० वर्षीयाबीच यस्तो प्रेम!
उत्तर काेरियामा पाँच मिनेटको प्रतिबन्धित फिल्म हेर्दा किशाेरलाई सुनाइयाे १४ वर्ष जेल!
कोरोना राहत लिएर किने ल्याम्बोर्गिनी, पोल खुलेपछि बस्ने भए ९ वर्ष जेल
तीन महिने नानीसहित एमाले महाधिवेशन हेर्न सिन्धुपाल्चोकबाट चितवन
समयभन्दा पहिला नै क्रिसमस लाइट बाल्नेलाई जरीवाना